orinasa mpamokatra entana amidy - BusinessFinder.Me
orinasa mpamokatra amidy
Orinasa fanasan-tongotra sy fiara 11 taona amidy any UAE Dubai
Main LLc ao amin'ny tanibe DED * Sampana Abu dhabi * 11 taona * Kaonty banky matanjaka * VAT * Fifanarahana mihoatra ny 30 amin'izao fotoana izao, alohan'ny 60+ * Ankehitriny: Mont...
Amidy Active Salon Ladies Salon any UAE
Ladies Salon amidy any Jumeirah 3 akaikin'ny Beach amin'ny Jumeirah Road; Dubai; Ampidiro ireo milina LPG sy Laser; Fivarotana ny vidiny 170,000 AED; Salon hita i ...
Salon salon Running tsara indrindra amidy any Dubai
Salon tsara tantana eto amin'ny faritra onenana. Mpiasa voaofana sy serivisy feno omena. Fivarotana amin'ny alàlan'ny fitaovana, tahiry, data base rehetra.
Café brilliant amidy any Dubai
Orinasa orana tena tsara 4000 metatra toradroa Tombony isam-bolana 75000 tamin'ny 120000 fa ankehitriny dia lasa mpividy matotra kokoa ny vidiny azo ifampiraharahana amin'ny seri ...
Fivarotana confectionery amidy any Dubai
Fandraharahana fivarotana antsinjarany amidy - Fividianana entana miaraka amina stock & furnished. Fitaovana ara-barotra = Elektronika, finday sy fitaovana, kojakoja, fanamboarana sy serivisy, Wa ...
Orinasa mikarakara trano ankapobeny amidy any Dubai
شر + + 200 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
Toeram-pivarotana amidy any Dubai مركز اعمال
Ivon-toeram-pandraharahana efa niorina tsara izay mipetraka ao Port saeed Deira. Misy biraon'ny 46 misy fanaka. Nofaina 90%, fotoana iray ahazoana vola be ...
Magazay fivarotana enta-fivarotana any Dubai
Mampiasà vola amin'ny Supermarket miaraka amina tombony azo antoka fa manangana supermarket amin'ny ambaratonga ifotony izahay, manolotra fiverenana azo antoka amin'ny 4 ka hatramin'ny 6 volana fa tsy ...
Ny Running Ladies Salon izay misy ao amin'ny faritra souk Bur Dubai hamidy eo no ho eo ny tompony dia miala ao UAE. Ireto ambany ireto ny antsipiriany. 1. 80000 / taona ny fanofana 2. 30% amin'ny DEW ...
Running Ladies Salon amidy ao amin'ny Business Bay any Dubai
Hofan-trano ho an'ny vehivavy any dubai marina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Miaraka amin'ny trano maro eo akaikin'ny hotely. Seza fanapahana 4, lohana shampoo 2, manicure 1 ...